Buuhoodle(Gebogebonews)-Waxaa maanta xaalad kacsanaan ah laga dareemayaa deegaano hoostaga Magaalada ee Buuhoodle ee Gobolka Togdheer oo shalay dagaal xooggan uu ku dhexmaray laba Maleeshiyo beeleed oo halkaas ka wada-dega.
Dagaalkan u dhexeeyay Maleeshiyaadka ayaa waxaa uu salka ku haaya arrimo la xidhiidha dilal aano qabiil ah oo horey u dhacay, waxaana sigaar ah uu uga dhacay dagaalka deegaan lagu magacaabo Horufadhi, iyadoona uu ka dhashay Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Ugu yaraan 4 qof ayaa ku geeriyooday dagaalkii ka dhacay Horufadhi oo labada dhinac, halka dad kalena ay dhaawacyo soo gaaddheen, kuwaasi oo la dhigay Xarumo Caafimaad.
Dadka deegaanka ayaa soo sheegaya in maanta xiisad dagaal laga dareemayo deegaanka Horufadhi iyo tuulooyin kale oo ku teedsan, taasi oo u dhexeeysa Maleeshiyaadkii dagaalamay, waxaana la sheegayaa in dhinacyada ay wadaan dhaq-dhaqaayo Ciidan.
Dhinaca kale waxaa socda dadaadlo kala duwan oo ay wadaan Odayaal dhaqameedyo iyo Culimo, iyagoo ku doonaya dadaalada inay ku joojiyaan Colaada kasoo cusboonaatay deegaanka Horufadhi ee hoostaga Magaalada Buuhoodle.
Dhow jeer oo hore ayaa waxaa deegaano hoostega Magaalada Buuhoodle ka dhacay dagaal beeleedyo geystay Khasaarooyin kala duwan, wallow markii dambe dadaalo la sameeyay heshiisyo laga gaaray Colaadaas.